Yintoni eyona ndlela kuhlangana a isipolish kubekho inkqubela elondon kuba ezinzima budlelwane - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ndingumntu British mhlophe indoda eyenze wachitha uninzi ubomi bakhe kwi-Canada, kodwa ngoku ubomi elondonNdinguye divorced, kodwa kuba zange kubekho abantwana kwaye ungathanda ukuba ahlangane a mnandi isipolish kubekho inkqubela. Mna, faka umgca ngaphantsi, yehova elungileyo imilo, elinolwazi, eyobuhlobo, courteous, courteous kwaye siphumelele. Ndithanda ukuba isipolish inkcubeko akahlawuli omkhulu ingqalelo ukuba usapho. Ndinguye kanjalo practicing Catholic kwaye ndiyayazi ukuba uninzi isipolish Catholics ingaba. Ukufumana uluhlu isipolish stores elondon kwaye beka phantsi ngaphandle kwindawo enye kubo, i-cashiers ingaba ikakhulu ibhinqa. ndiqonda ukuba isipolish abafazi ingaba beautiful (ngokunxulumene ulwazi). Mna balingwe ukuba badibane nabo, kodwa ngaphandle impumelelo. Ndifuna a isipolish umfazi. Ukuba unengxaki kunye insulting abantu. Kululuvo ulwaphulo-mthetho ukuhlangabezana mnandi abantu Emhlabeni? Ethabatha BR. Yintoni i-pathetic jikeleziso ukuba yodidi gentleman. Ngaba isithuko umntu kuba akukho sizathu.
Alikwazi ukwahlula ingxaki kwaphela xa athi:"ndifuna a isipolish mfazi."Uza kuthabatha njengokuba wathi, ngelixa yena kakhulu gca malunga ntoni ngokwenene zithetha ukuthini.
Nawe kanjalo siyazi ukuba zisekhona abantu abathe ngqo kuvela izizwe e-Afrika kwaye kumbindi Mpuma.
Ngoko ke awuqinisekanga ke ukhathaza abantu beli inkcubeko ngenxa yokuba umva elidlulileyo xa ubona kwabo kulo iindawo ngathi i-dubai, apho abantu abaninzi andinaku phupha ka-bechitha a vacation apho.
Ukumkani yimeko embi umntu kwaye kufuneka ukuba phambi kokuba uthetha. Ngoko ke, kutheni kufuneka nawe ube offended xa ndikuxelela inyaniso yokuba siphathe abafazi ngendlela efanayo baya siphathe camels? Inyaniso hurts okuninzi. Ngoko ke, kutheni hayi yeka ke endaweni hiding inyaniso? Molo, boys, ndingumntu omnye-yeminyaka ubudala Londoner ka-eliphakathi Empuma lemveli, ezama a isipolish umfazi. Nangona kunjalo ukuba ndinguye ngempumelelo kwaye ndiya kuba kuphela wam uyobhi, mna akhange na zifunyenweyo wam ngcono isiqingatha kwangoku. Ukuba uyayazi i-omdala isipolish kubekho inkqubela kunye blue amehlo, ukukhanya iinwele, encinane nose kwaye kancinci plump, nceda uqhagamshelane kum ngaphandle ububele wakho entliziyweni. Ezoyikekayo na le guy kunye (andikho esithi indoda), i-kubekho inkqubela-oyikhethileyo mentality njenge ukhetha IKEA ifenitshala kwi-catalog. Kubalulekile ngokupheleleyo stupid ukuba ilwalele naliphi na nationality, iinwele umbala, amehlo, njalo-njalo. Kutheni ecaleni a beautiful kwaye decent kubekho inkqubela? Nyulu immaturity.
Leverage-akukho mfuneko isithuko abantu
Sam: Njani ubudala ingaba kwaye zingaphi abafazi ufuna ngokwenene ukwazi? Kulungile, omnye teenager ukusuka Chicago. Kulungile, boys iya kuba boys, kwaye ngoko uza kukhula kunye nokufumanisa yokwenene ebomini.
Ngaba awuyidingi impendulo, yokucinga ngayo ukuba kwakukho ndacela indlela endala unoxanduva kwaye zingaphi abantu uyazi ngenene.
le ayiyo kakhulu efanelekileyo incoko kule ngqungquthela, yokucinga ngayo. Uyakwazi kuphela guess, kwaye akukho ukuthandabuza ucinga ngala kancinci ngakumbi enlightened. Salama: kuphela ngokunxulumene ubukhulu uluvo lwam, uninzi iimeko - purely childish kwaye stupid.
Ukuba umyalezo yabhalwa ngu a teenager, kubalulekile understandable, kodwa ukuba ibingu ibhalwe ngu i-omdala, kubaluleke kakhulu ezibuhlungu.
Bangaphi abafazi ukusuka Poland nakwamanye amazwe ukuba Kufuneka ubuqu zahlangana)? Mhlawumbi ngu personal, childish uluvo lwakhe. Kodwa ngabo behaving njenge abantwana kwakhona.
Ngoko ke, yintoni yakho kwesizathu? Ewe, andikho a teenager.
Salama: Yima arguing. Musa undixelele ke efumana ezininzi ezinzima kwaye kanjalo ngakumbi yokubhalwa ukuba isiseko lwakho uluvo ngayo (Ubukhulu okanye amaqela okhetho). Kwaye Ewe, kuya kubonisa immaturity okanye elula stupidity. Salama: apha, mna ke nawe).
Awunokwazi thetha ne-wonke ihlathi ukuba ukhe ubene ikhangela nje omnye umthi).
Ngokusekelwe lwakho uluvo lwam okanye zizenzo, kubalulekile useless ukuthi ukuba ayinjalo esihle kakhulu. Ndiyazi shouldn khange unakekele le shit, kodwa akukho mcimbi indlela kawonke-wonke oko kukuthi, iyagqitha pha ngaphandle esithi ukuba le indlela yokuyi ngu absolutely stupid kwaye useless. Ndingumntu omnye-unyaka-old boy i-american studying elondon kwaye uzama ukufumana ukwazi abanye iipali ngexesha mna apha. Nangona kunjalo ukuba ndiya wazalelwa waza wavusa eamerika, ndithetha ngokukhululekileyo kunye wam isipolish neighbors kwaye kufuneka isipolish ubumi ngokusebenzisa abazali bam. Nangona kunjalo, ndiya kuba zange wachitha kakhulu kakhulu ixesha Poland (ubuninzi ngeveki okanye u-wonke ambalwa eminyaka) kwaye ungathanda ukufumana ukwazi le yinxalenye wam lemveli ngcono (kanjalo, ukususela ndalishiya ikhaya ngonyaka eyadlulayo, bazalwana isipolish sele deteriorated ngoba andiqondi thetha abazali bam yonke imihla, kwaye mna ngenene musa ufuna alahlekelwe nako ukuthetha). Ngoko ke mna ke bemangalisiwe apho elondon ungakwazi ukufumana Paulie kwaye kufuneka incoko kunye naye. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, mna anayithathela balingwe indima yam s, isipolish society, kodwa abazange kuyanqaphazekaarely kuhlangana, kwaye ndafumanisa ukuba amalungu azo kukho iselwa polite (bonke nokwazi ngamnye enye, ukususela i-warsaw, kwaye ingaba kakhulu ngokusondeleleneyo enxulumene, mna ke ngaphezulu komhlaba kuba nabo kunokuba Americans othetha isipolish).
Nanini na apho ufuna guys undixelele ukuba ndiye, ndizakuyenza linda.
Mna ke kanjalo ukucinga ka-renting i-apartment kwi-i-warsaw, mhlawumbi ngeveki okanye ezimbini oku ehlotyeni (Airbnb), ukuba zama immerse ngokwakho kwi-inkcubeko.
Ukwenza Poland kwi-Poland, wabonakalisa dibanisa imbono ye-Americans. Oku lever intsha isithuko ukuba Europeans kwaye i-underestimation le imeko nge ugqirha eliphakathi Empuma society (i-camel urhwebo) kwaye zimvo lomgaqo-zeentloni naluphi na uhlobo. Kubalulekile iselwa obvious ukuba usebenzisa i-Isigrike, yi-umzekelo ukuziphatha. Ngoku oku isixhosa gentleman, ngubani ikhangela a isipolish elonyuliweyo kuba kunokwenzeka elizayo umfazi, ngowethu European abantu. Senza phakathi kwabantu bethu wethu kunye kweli lizwe ayifanele ibe Levantine ke ishishini.
Thina Europeans ingaba abantu kunye ezininzi kwaye amasebe ethu umehluko.
Gwybodaeth Am Zaporozhye Rhanbarth yn Dyddio safle
fun phones photo watshata abafazi wanting ukuya kuhlangana nawe phezulu Chatroulette zephondo ividiyo incoko erotic familiarity jonga ifowuni i-intanethi incoko kunye kubekho inkqubela esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela free Chatroulette-intanethi ukufumana acquainted kuba ezinzima ubudlelwane phakathi Dating site free ubhaliso